Watashi ni XX Shinasai ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
Watashi ni XX Shinasai ( 2018 )
English Title : Mission of Love
Japan Manga Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမ Ema Toyama ရေးသားထားတဲ့ ” Watashi ni XX Shinasai ” Manga Series ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ …
အပိုင်း (၁) မှာ ဘာမှမဖြစ်သေးပေမယ့် preview ကြည့်ပြီး သကာလ Blah Blah တွေ ပါဝင်လာမယ်လို့ အာရုံရလာလို့ 18+ ဆိုပြီး ကြိုတင် warning ပေးလိုက်ရပါတယ် …
စုစုပေါင်း အပိုင်း ၄ ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှင့်ဆဲပါ …
ဟီိမုရာ ယုကီန က တော့ ကျော်ကြားတဲ့ web novelist တစ်ယောက်ပါ … သူက အချစ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုံးဝ စိတ်မဝင်စားသူတစ်ယောက်ပေါ့ … စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာထက် အတွေ့အကြုံမရှိဖူးတာပေါ့ ( ကြည့်ရတာ အပြင်မှာလည်း အချစ်ကို စိတ်မဝင်စားဖူးဆိုတဲ့ shawty လေးတွေက အတွေ့အကြုံမရှိသေးလို့ ဖြစ်မယ်နော် … အတွေ့အကြုံရှိအောင် ပုရိသတို့ ဒို့မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါစို့ :3 ) …
တစ်နေ့ သူ့ရဲ့ အယ်ဒီတာက သူ့ကို အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးခိုင်းပါတော့တယ် … ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာ လုံးလား ? ပြားလား ? မသိတဲ့ ဟီမုရာ ယုကီန အတွက်တော့ အခက်တွေ့စေတာပေါ့ … ဒါပေမဲ့လည်း သူ့အကြောင်းကို ကြိုသိထားတဲ့ အယ်ဒီတာကြီးက သူ့အတွက် ဂိမ်းလေးတစ်ခု ပြင်ဆင်ထားပါတယ် … Love Simulation ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးပေါ့ …
အဲ့ဂိမ်းလေးထဲမှာ Character ရွေးပြီး ဆော့ရသလိုပေါ့ … Game ထဲရောက်တဲ့အခန်းတွေကို Chinese Drama တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Love O2O လိုမျိုး ရိုက်ပြထားပါတယ် …
ကဲ … အဲ့ ဂိမ်းလေးထဲမှာ အချစ်ကိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ FA တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟီမုရာ ယုကီန တစ်ယောက် ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေ ယူမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ …
ဒါနဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ အဲ့လိုဂိမ်းမျိုး အပြင်မှာ ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းမိနေကြမှာတော့ အမှန်ပဲ …
Starring: Anna Yamada, Daichi Kaneko, Kanta Sato, Orakio, Riho Takada, Tina Tamashiro, Yuta Koseki,
Trailer: Watashi ni XX Shinasai ( 2018 )